Wakiilada golaha countiga Nairobi oo doonayo in gavanaha lagula xisaabtamo 20-ka bilyan ee la sheegay in la lunsaday – The Voice of Northeastern Kenya
Wakiilada golaha countiga Nairobi oo doonayo in gavanaha lagula xisaabtamo 20-ka bilyan ee la sheegay in la lunsaday
Star FM December 7, 2016
Wakiilada golaha baarlamaanka hoose ee countiga Nairobi gaar ahaana kuwa ka soo jeedo xisbiga Jubilee ayaa Dr.Evans Kidero ku dhaliilay hadalka ka soo yeeray oo uu wax kama jiraan ku tilmaamay warbixinta lagu sheegay in lacag laga lunsaday countigiisa
Lacag dhan 20 bilyan oo shilini ayaa warbixin uu soo saaray hanta dhowrka guud ee dalka Edward Ouko lagu xusay in anan la ogeyn sida loo adeegsaday.
Cabdi Guyo oo ka mid wakiiladan ayaa shir jaraaid oo ay qabteen ka sheegay in warbixinta ay tahay mid lagu kalsoonaan karo sidaas awgeedna loo baahanyahay anan daaqada laga tuurin balse baaritaan ku aadan la billabo.
Mr Guyo oo fadeexadan ka halaya ayaa yiri gudiiga anshaxa iyo la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC iyo agaasimaha waaxda dacwad oogista Keriako Tobiko waxaan ugu baaqeyna in ay sida ugu dhaqsiyaha badan baaritaanadan guda galaan .
Wuxuu intaas ku daray in golaha hoose ee maamul goboleeedka Nairobi uu baasmariyay 29.9 bilyan oo shilin oo lagu qoondeyay miisaniyad sanadeedkii 2014-2015-kii halka 8 bilyan keli lagu qarash geliyay howlo kala duwan.
Dhanka kale Mr. Guyo ayaa sheegay in tan iyo sanadii 2013-kii aynan qandarasleyda lacagtooda la sinin halka shaqooyin badan ay arrintan awgeed istageen .
← Garoonka diyaaradaha ee JKIA oo la xirayo mudo hal saac ah
Dowlada oo loogu baaqay in ay xaliso shaqa joojinta dhaqatiirta →